Fuji Transonic ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Fuji transonic 2.8 nyochaa - edepụtara ajụjụ na azịza
Fuji transonic 2.8 nyochaa - edepụtara ajụjụ na azịza
Fuji Transonic ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
IheNtugharidị ka ọkwọ ụgbọ elu ụwaigwe kwụ otu ebe. Ọtụtụ oge mụ na ya nọrọ bụ n'oge mkpọchi Covid-19, yabụ ọtụtụ n'ime ndị njem m dị mkpụmkpụ karịa ka ọ dị na mbụ. Nke ahụ dabara adaba, dị kaigwe kwụ otu ebena-etinye onwe ya nke ọma na obere ọgbụgba ọkụ na enwere m mmasị ịgba ọsọ na ọsọ na ogologo oge.Jul 15. 2020bọchị 2020
Mkpụrụ ụkwụ profaịlụ dị omimi na-egbukepụ egbukepụ, ha na-eme mkpọtụ dị jụụ, mana imirikiti ha na-enye uru aerodynamic dị mkpa karịa rim ọkọlọtọ nwere profaịlụ igbe dị larịị. Ma ọtụtụ mmadụ na-echegbu onwe ha banyere ịnyagharị na crosswinds na enwere ezigbo ihe kpatara ya mgbe ị na-atụgharị aka na-atụghị anya ya ọ nwere ike ịtụ ụjọ. Ezigbo ihe egwu na ụfọdụ.
Ma olee nsogbu dị njọ? N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na profaịlụ miri emi nke ikuku na-efegharị. (egwu dị egwu) Anyị na-eji ụfọdụ igwe kwụ otu ebe nke Zip iji kọwaa nke a n'ihi na ha bụ otu n'ime ndị na-akwado anyị. Ma n'ihi na ha ejiri nnukwu ego mepụta wiil ndị dị mfe iji rụọ ọrụ na ikuku.
Vidio na-etinyekwa maka ụdị ụkwụ ndị ọzọ. Otu n'ime ihe ndị mere anyị ji emeso isiokwu a bụ n'ihi na diski breeki na-agba ndị mmadụ ume ka ha jiri wiilị carbon rụọ ọrụ oge niile. Ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya breeki na okporo ụzọ dị mma, nke ruru unyi dị ka anyị nwere taa ị nwere ike ibibi ikuku ikuku ikuku gị ngwa ngwa.
Mana mgbe i wepụrụ nke ahụ, enweghị ezigbo ihe mkpali ịghara iji wiilị carbon mee ihe n'afọ niile ewezuga ụgwọ mbụ nke inwe ike ime ka ọ na-agba ọsọ oge niile. Ajụjụ wee bụrụ, ị nwere ike? (Joy music) N’ụzọ bụ isi, taya miri emi nwere ike ịdị na-akwụsi ike karị n’ihi na ha na-enye ikuku ebe sara mbara. Ugbu a, nke a dị njọ na ihu karịa ka ọ dị n'azụ n'ihi na ụkwụ ihu nwere ike ịtụ ogho. (Percussion music) Ọ dị mkpa ịghọta nke mbụ ihe mere wheel na miri emi profaịlụ ji adị ejighị n'aka.
Ya mere, lee ụfọdụ sayensị. Mgbe ị na-akwọ ụgbọala, taya ahụ bụ ihe na-eduga na nke a na-ekewa ikuku. Rim ahụ na-achịkwa ikuku ahụ ma na-enyere ya aka ijikọ nke ọma na nsọtụ na-aga n'azụ rim.
Echiche dị ebe a bụ na nke a ga-ebelata ịdọrọ ma mee ka ị dị ngwa karịa otu mgbalị ahụ. Nke a na-arụ ọrụ nke ọma ugbu a mgbe ifufe si na zero si ogo nke yaw, nke pụtara isi-na, mana mgbe akụkụ gị bidoro ịba ụba, dịka n'etiti Nsogbu nwere ike ibilite, dịka ọmụmaatụ na ikuku ikuku. Na akụkụ akụkụ buru ibu, ikuku ikuku nwere ike wepu na rim na mberede.
Nke a na - ebute nsogbu na ọgba aghara na mberede nke na - etolite na mpaghara nsogbu dị ala n'azụ rim na - a suụ ya n'ụzọ dị irè azụ, nke na-adịghị mma. Dị ụdị ụgbọ elu aerodynamic nwekwara echiche yiri nke nku nku ụgbọelu. Na ihe dị iche na mgbe ụgbọ elu ụgbọelu na-ada, ọ na-esi na mbara igwe daa.
Ọ na-ejide ifufe. Nke a na-agbagha, nwere ike ịdị egwu ma na-ebelata gị. Nke a abụghị oge m ịnya igwe kwụ otu ebe, mana ka echiche gị na-agba ọsọ.
Na m ahụmahụ na oge ikpe a n'ihu wheel na miri emi profaịlụ mgbe m chere na akwusighi n'ihi ifufe. Ọtụtụ mgbe, m na-apụ na mkpịta aka m atọ yana ọ na-eme ka m ghara ịdị egwu. Okwesighi ibu oke ohia.
Obere mkpịsị aka ebe a nwere ike ime ka ị jiri nwayọ na-aga ụkwụ, na ụfọdụ ụfọdụ nwere onwe gị. N'ụbọchị ikuku na-eku, obere obere ihe ndị a na-eme ụjọ nwere ike bụrụ ihe a na-ahụkarị wee gbakwunye oge dị ukwuu. Ikekwe nke kachasị njọ nke nwere ike ime bụ na ị ga - eme ka a gbapụ gị kpamkpam igwe kwụ otu ebe, ama ama onye mmeri nke Tour de France Geraint Thomas ka ọ gbapụrụ na igwe kwụ otu ebe na Gent-Wevelgem na 2015.
Nke a nwekwara ike ịpụta na n'ọnọdụ ikuku, igwe eletriki dị ala adịghị mkpa karịa nke dị larịị, ọ nwere ike bụrụ nwayọ nwayọ, ọ dịkwa ụdị ọmarịcha ka ị ghara inwe mmetụta na a na-efesa gị n'ụgbọala ahụ oge, albeit miri emi Tread wiil twitch na ifufe, ọ bụghị dị ka ihe ọjọọ a nsogbu dị ka i nwere ike iche. Ọ dị mma maka ntụle, m na-ebu ihe dị ka kilogram 70 ma ga-agagharị igwe kwụ otu ebe dị omimi 40 ruo 60 afọ gburugburu. Ihe kpatara nke a ugbu a bụ isi mmeri aero n'ihi na m niile banye n'ụgbọ elu ma chọọ enyemaka niile m ga-enweta.
Ma kwa n'ihi na ọ bụ gh. Ngwurugwu wiil ahụ ka mma nke ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga, ha adịla mfe ịnya karịa usoro V nke ochie. Laa azụ mgbe akụkụ miri emi pụtara, ha nwere ọdịdị V.
Ugbu a nke ahụ dị ezigbo mma na ogo efu, mana ọ bụghị dị ka ikuku yaw na ndị ọzọ. Anyaukwu bụ okwu ọrụ aka maka akụkụ ifufe. Kedụ onye ị na-eme? Ọ bụghị ruo mgbe 2000s ka ị ga-atụfu nwa ojii na ọcha na mkpuchi flack. (Opi Wah Wah Wah) Na Reality, mgbe ị na-akwọ ụgbọala na ata ụwa, na yaw n'akuku nke ifufe bụ nnọọ adịkarịghị efu, nke pụtara na ọ bụ isi-na.
Ọ na-abịakarị n'akụkụ gị n'akụkụ niile dị iche iche ma na-agbanwe mgbe niile. Ọ dabara nke ọma, ndị na-emepụta wiil ahụ ghọtara nke a wee bido mebe rim etu esi - igwe niile bụ otu. Nzọụkwụ ọzọ dị mkpa na mmepe nke wiilị profaịlụ miri emi bụ ojiji nke okpomoku toro gburugburu.
Ugbu a, na 1996, patent, nke jikọrọ isi na Zipp, ka akwadoro maka profaịlụ toroidal rim, nke na usoro nke mgbakọ na mwepụ adịghị mma, nke U. Otutu uzu ugboala di otua dika o dikwa nma nke ikuku ma ghara idi ike ikuku dika o kwere ka uzo di elu. N’ime afọ iri abụọ gara aga, etinyere profaịlụ rim nke yiri mgbaaka ka etinyere ya ala iji jiri nke nta nke nta melite ya na ikuku ikuku yana ụzọ mgbochi ndị a.
Ebumnuche ebe a bụ na ọnụ ọgụgụ ọtụtụ bumpsor na 454 kamakwa na 858 na-enye ohere ọtụtụ ebe maka ịwụfu vortex dị elu. Kedu ihe dị n'ụwa bụ nke a, a na m anụ ka ị na-ajụ, Ka nrụgide ahụ too ma sụgharịa ikuku niile n'otu nnukwu ụlọ ahịa nke ga-ebute oke ọgbụgba. Okwesiri ka okwesiri ikwe ka ikuku obula na ekuputa ikuku di nfe.
Nke ahụ na - eme ka igwe kwụ otu ebe dị mfe ijide, dị ka Zipp si kwuo, ma ka na - ejidekwa ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ. Usoro iwu nke a bụ na inwere ike ịgba ọsọ. Na-akpali.
Ikwesiri inweta uzo nkpuru miri emi ma oburu na odi omimi. Mee elu mee ala, ha niile na-agbadata maka mkpa gị na ebumnuche ịchọrọ ha. Anyị anaghị atụ aro maka nke abụọ na ịchọrọ ị nweta onwe gị ụzọ miri emi.
Enweghị ihe ọ bụla dị njọ na igbe igbe igbe aluminom a na-emepụta site na imewe, wiil ndị miri emi na-adị mfe ma dị nchebe iji jikwaa ha ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịrụ ọrụ ha kwa afọ. Otú ọ dị, anyị kwesịrị ịkọwa, na ha ka nwere ike ịdị ọnụ ọgụgụ, ọ bụ ezie na ọ ka mma karịa ogwe osisi dị larịị, ma ọ bụrụ na m ga-ahọrọ wiilị oge m ga-aga maka ihu igwe 70-80 dị omimi, nke ọma belụsọ na windiest ụbọchị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na m nwere naanị otu ụkwụ wiil na-agba ọsọ mgbe ahụ aga m aga maka ịdị omimi dị gburugburu 40 ruo 50 millimeters.
Nke a bụ n'ihi na nke a bụ omimi m mara na ọ ga-adị mma ịnya oge ọtụtụ oge na mgbe ọ na-abụ oke ikuku na-agba ịnyịnya ụdị igwe kwụ otu ebe ọ dị m ka ọ dị, nke ọma, ọ bụ na ọ ga-abụ oke ikuku na-agba ịnyịnya n'ike zuru oke n'agbanyeghị nke wiil ị a Ọ bụkwa a n'ezie vasatail omimi, mgbe ihe dị ka 858, ọ bụ ezie na dị nnọọ ngwa ngwa, bụ a bit ọzọ pụrụ iche ọkwọ ụgbọala nwere ike na-ata ahụhụ ndị ọzọ na crosswinds. Ya mere, ọ bụrụ na ị pere mpe, tụlee ihe ị na-ebu ire ụtọ, karịchaa n'ihu. Na n'ihu na ị nwere obere ibu n'elu wheel iji gbochie twitching ụwa ahụ ọma, ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-agba ịnyịnya n'ebe a otutu mgbe ahụ ị pụrụ iji nweta flatter wiil nakwa.
Ebe kachasị mma n'ụwa bụ Mt. Everest n'ụzọ, enyochare m ya n'ezie. Nwere olileanya na ịchọta edemede a bara uru na ihe mmụta.
Ọ bụrụ otu a, nye ya mkpịsị aka ukwu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ edemede ọzọ m ga - akwado n’isiokwu a nke na - egosi gị etu eserese nwere ike isi aga, ọ bụ ebe a n’okpuru.
Fuji Bikes dị mma?
N'ozuzu, enwere ọtụtụ ihe ịchọrọ banyereFujiokporo ụzọanyịnya igwe. Ọ dị mma karịa n'okporo ụzọ dị larịị na mgbada, etiti ahụ siri ike na nke oge a, njikwa na-arụ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ ebe na-arụ ọrụnke ọmaọnụ.Ọgọst 31 2020
Ndewo ndi be anyi, taata enweghi ube obula anyi ga-elele anya nke anya njem Fuji ya mere enwere m igwe kwụ otu ebe maka na enwere m ya ihe dika afọ abụọ na ọkara azụrụ m ya na Jenụwarị 2014 ya ihe dị ka kilomita 2,000 na enwere m ya naanị ihe ọma m ga-ekwu banyere ya, nke a bụ Adama Tur, ọ bụ 1629 na tupu m tinye ya, enwere m ike ịnwe kilomita atọ ma ọ bụ narị anọ na igwe kwụ otu ebe n'ihi gịnị ka m ga-ekwu na nke a bụ na sentimita 58, nke ndị ọzọ ga-atụle buru oke ibu, echekwara m banyere ime nke ahụ? buru nke buru ibu karịa ma ọ bụ nke buru ibu n'ihi na m ziri ezi n'ihi na ha abụọ dabara m, ụkwụ m isii dị elu, 183 cm ma ị nwere ike ịhụ 58 cm, ekwesịrị m ikwu na na mbụ, igwe kwụ otu ebe buru oke ibu m, M nwere a obere azụ mgbu, nke mụbaa na na nnukwu oversized etiti, ma mgbe m na-eme ka ọ na ọ bụ nrọ, naanị igwe kwụ otu ebe ikike otú ziri ezi ma mara mma nke na m ga-gbanwee ya maka a mkpumkpu etiti igwe kwụ otu ebe atit bụ oche m na-aga maka Zụtara $ 30 ma ọ bụ $ 40 na REI Mkpa na Sir Basic Seat back ebe a ọ bụ naanị na-egbu mgbu ya mere mgbe 600 kilomita m rere oche ahụ ihe dị ka otu narị dollar na m nwetara nke a maka 40 na ọ bụ naanị ịtụnanya, ya mere ka ọ dị gị mma ịhụ panniers m zụtara na Amazon nnukwu ọrụ m na-ekwu na m dere ka m fesa na mmiri na-agbapụta ihe dị ka elekere, mmiri ozuzo na-adịgide adịgide na ihe niile dị n'ime ya ka kpọrọ nkụ mgbe m mechara ya, njem ahụ kwụsịrị ihe ndị ọzọ na m tinye akwa mgbịrịgba a dị ịtụnanya na ị nọ ebe dị anya, n'ezie enwere m ọkụ nke m na-etinyeghị n'ụtụtụ a na bo ngịgaị olulu na mgbapụta na ndị nche apịtị bụ ihe ahụ dị mkpa, ha na-efu ihe dị ka ego iri atọ na REI na-arụ ọrụ dị egwu nke idebe mmiri niile na-asọ mgbe ị na-agba ọsọ, mgbe ị na-ede na mmiri na-ezo, kedụ ihe m nwere ike ikwu , Mbido ShimanoDeore dị mfe nke ukwuu nke na echeghị m ije ọ bụla ma ọ bụ sag ọ bụla, na ọ zuru oke? Amaara m na ọ sitere na ntọala igwe kwụ otu ebe, mana nke ahụ bụ ihe Fuji tinyere ebe ahụ ma ọ zuru oke, yabụ mgbe puku puku abụọ ị ga - ahụ ihu ụkwụ na - aga n'ihu, ọ bụ ezigbo taya mbụ siri ike, ihe niile na - arụ ọrụ zuru oke, ọ dị mma, akpatre ihe abuo banyere ot too ga-esi agwa? bụ ezigbo touring bike, ọ na-abịa na mapụtara spokes mapụtara mapụtara spokes na-ekwu ya niile m na-ekwu, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị agba na gbajiri spokes na i nwere abụọ mapụtara spokes na ị pụrụ ịhụ na m kwukwara na kickstand na igwe kwụ otu ebe m ' m na-eche banyere dinggbakwunye etiti etiti ụkwụ ụkwụ abụọ nwere ụkwụ kwụ ọtọ, m nwere ike ime ka ị mara na ị na-ejigide ya karịa mgbe m na-adọba ya ebe, pedals niile bụ nke mbụ, nke ị na-ejughị na ha ngwa ngwa a na myFuji Touring Bike lee gi oge ozo obula
Fuji anyịnya igwe na-apụ apụ ahịa?
Na November 2018 ASE (nne na nnaụlọ ọrụnke ASI na Bicycle Performance) kwupụtara enweghị ego,na-ahapụakara aka nke nkesa USFugbọ Fujiejighi n'aka. E kwuru na Jenụwarị 17, 2019 na isi na-azụ akụ ASE (nne na nna ahụụlọ ọrụnkeFuji)pụọenweghị ego.
Fuji bụ igwe kwụ otu ebe na Japan?
Tọrọ ntọala naJapandị ka NichibeiFuji, ụlọ ọrụ ahụ na-amalite ibubata American na Bekeeanyịnya igwe. Okwu a bu 'Nichibei' ka asughariri dika 'Ndị Japan-America. N'ime afọ 20 ụlọ ọrụ ahụ na-ewu nke yaigwe.
Anyị na-apụ ebe a taa na Mubara Ejima-Circuit na dịka ị nwere ike ịnụ n’elu mgbidi enwere ịkpafu, mana nke a abụghị naanị ihe na-aga ije, e nwekwara igwe kwụ otu ebe, na-agagharị ** Smexy Sliding Action *** * memes about na-agba ọsọ na 90s ** A na-akpọ ihe omume a 'BARIDORI' na okwu 'BARIBARI' dị ka ụda otu ọgba tum tum niile na-agba ọsọ ọnụ na o doro anya na 'DORI' sitere 'DORIFUTO' nke pụtara na Ntanetị pụtara ọgba tum tum. na ịkpafu omume. Ma dị ka ụgbọ ala ndị a adịghị ka ụgbọ ala egwuregwu nkịtị, ọgba tum tum ebe a adịghị ka igwe kwụ otu ebe nkịtị. ** Dat ọdụ Doe. **** whefọdụ ihe enyemaka. *** * More wheelie edinam. ** Dị nnọọ ka ụgbọ ala dị omimi miri emi, na-ada ụda, nke na-enwu enwu bụ nke na-abụghị nke ụgbọ ala egwuregwu mara mma, ọgba tum tum ebe a taa bụ nke megidere ọgba tum tum egwuregwu. * Cheers ** Ee !! Kakoi !! (Cool) ** More nwee ọ cheụ * Ya mere ụdị ọzọ nke ndị nkịtị ị hụrụ na egwuregwu igwe kwụ otu ebe na otu ụbọchị, ọ bụ otu ihe ahụ ịkpafu, nke a bụ ụdị igwe kwụ otu ebe nke ịkpafu na Japan. ** Chaị otu drone. **** Icheta. ..
Mkpọtụ-Boop **** Whefọdụ Enyemaka Ezigbo Ihe. **** Nwoke a na ndi wheel ya ** Nke oma, anyi aghaghi ilebanye anya na wiil ndi a.
Typesdị ịnyịnya ígwè ndị a na-ewu ewu na '90s ma ị hụla ha mgbe mgbe n'ugwu, na-agbagharị otu ụzọ ahụ na-aga n'ihu, ma ọ bụ na-agbagharị gburugburu ebe ahụ. Ihe igwe kwụ otu ebe maka ụmụ nwoke a bụ nke a: Honda CBR 400 RR, nke a na-akpọ na Japanese: 'YON HYAKU DABURUAARU' (400 Double R) nke ha mere ka 'YONDABO' (4 Double) O doro anya na ha na-agbakwa obere ịnyịnya ígwè na igwe ọkụ abụọ.
Akụkụ ọzọ nke igwe kwụ otu ebe a bụ uwe ndị ahụ ụmụ okorobịa na-eji akpụkpọ anụ ha eme karịa aha otu akpụkpọ anụ na azụ, n'ezie ọ dị ọnụ ala karịa itinye aha gị na jersey karịa leta abụọ. lelee nsụgharị Alexi ** Ezigbo ọrụ !! Nke a bụ Keisuke Kamimori, ị nwere ike iso ya ebe a na Instagram, ọ bụ nwoke ahụ kpọrọ m ka m bịa ebe a taa ọ na-agba ịnyịnya igwe mana o nwekwara ihe a kwa ebe ahụ, ka anyị gaa lelee ihe a. ** Ihe m chere bụ ngwakọta nke 'ndewo' na 'daalụ' na Japanese ** You nwere ike ịhụla ihe a tupu oge serena, mana ọ na-agagharị -Car.
Keisuke chọrọ ụgbọ ala na-asọgharị mana ọ chọkwara ihe ọ ga-eburu igwe kwụ otu ebe ya mere ọ zụtara ụgbọ ala na malitere ịkpafu kama. ** HOONIMEME ** Ọgbọ a nke Serena bụ ụgbọala azụ azụ ma na-agbanyekwa SR20-DE, nke bụ nsụgharị NA site na ngwaahịa ka ọ ghara iwe ọtụtụ echiche iji hụ na ị nwere ike ịkpafu nke a.
O di nwute, tupu m rute ebe a taa, Keisuke na-afụ turbo, mana enwere m edemede ya nke m gbagburu ogologo oge gara aga mgbe m na-agagharị na egwu a mgbe enwere onwe ya. Ka anyi gbue ya * * Downshift ** SCREEEEEEEEE ** SCREE with BRAP *** Nnoo dị nnọọ ebube BRAAP & SCREEE maka ndị ọzọ nke ịgba ọsọ Keisuke-san. lee anya n'azu, o welite oche oche bọket abụọ.
Ọ bụ otu n'ime ụmụ okorobịa na-agba ọsọ taa ma achọghị m ịkpasu ya iwe nke ukwuu, mana ebe injin ahụ dị ebe a, akụkụ nke mkpuchi ahụ meghere dị ka obere nnyefe nkịtị. Enwere m ike ịnweta edemede site na oge ikpeazụ, ọ bụrụ na m mee ya, m ga-edebe ya ebe ahụ ozugbo * Kore wa Daijyobu desu ka? (Nke ahụ ọ dị mma?) *** SR20 n'ebube ya niile ** Na mbụ, echiche maka ya bụ iji nke a dị ka njem ụgbọ ịnyịnya ígwè ya, mana dịka ị pụrụ ịhụ oche ndị a ugbu a agbada ka o wee nwee ike iji igwe kwụ otu ebe ya kama Trailer na-adọkpụ. * Yamaha ụda ** Brooms * * Brooms ** Brooms * * Brooms * * Brooms * * BRoOm ** Brrrrrrrrrrrroooom ** Brooms * * Brooms *** Heck yeah, Punch. *** WRrroooo ** wrrRRaaa ** Igwe igwe, wdg. More noda mkpọtụ wdg. *** Tail DoE. *** Ee !!! ** Mi teku dasai kono kakoii sugata !! (Biko lelee ụdị mma a!) *** Enweghị m ihe ọ bụla na-adọrọ mmasị ikwu biko nwee ọ enjoyụ n'ọsọ igwe kwụ otu ebe **** WHEELIE MAN RETURNETH ** Agaghị m ahapụ ozugbo m were foto ikpeazụ.
Emere m mmiri iyi IRL na Twitch, ma ọ bụrụ na ịgbasoghị m na Twitchlinks n'okpuru. ** Soro m ma obu ozo. ** Adị m njọ ma nwee oke ibu shuga; a Coffee Maxandchocolate coronet achịcha dị iche iche.
Ya mere, taa ihe dị iche. Mgba tum tum, ọ tụrụ m n'anya na ha nọ nso mmụọ na-agagharị n'ụgbọala. Ọ dị mma ma soro m dị ka mgbe niile na Twitch, Instagram, Snapchat.
Ka o sina dị, daalụ maka ikiri. Lee gị oge ọzọ. ** Thegha nke engines Japanese Sportbike na-eme ka uche gị jupụta na udo zuru ezu **** Peace Inner **** Inner Peace **** Inner Peace **** Inner Peace *** * Ojuju na KAKOII (oyi) Nwoke bịara ileta gị, kwuo okwu, sị 'nọrọ jụụ.' NA-EBU OBI N’ELUGWU OGWU. **** EMEMEMEMEMEME **
Emere igwe kwụ otu ebe Fuji na China?
Fujiịnyịnya ígwè dị ugbu awuruna Taichung, Taiwan; Dong Guan, Guangdong Province,China; na Kutno, Poland site na IdealIgwe kwụ otu ebeCorporation. Na United States, ndịFujiika nwere Advanced Sports International (ASI), ụlọ ọrụ na-ahụ maka onwe ya nke dị na Philadelphia, Pennsylvania.
Fuji na-aga ahịa?
Na November 2018 ASE (nne na nnaụlọ ọrụnke ASI na arụmọrụIgwe) kwupụtara enweghị ego,na-ahapụakara aka nke nkesa USFugbọ Fujiejighi n'aka. E kwuru na Jenụwarị 17, 2019 na isi na-azụ akụ ASE (nne na nna ahụụlọ ọrụnkeFuji)pụọenweghị ego.